Apple inovhara iyo iCloud Yakavanzika Relay chimiro cheiyo iOS 15 muRussia | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 17/09/2021 20:00 | iOS 15, Noticias
iOS 15 uye iPadOS 15 inouya pamwe chete nechimwe chezvinhu zvinonyanya kufarira zveApple: iCloud Yakavanzika ataure kana iCloud Yakavanzika ataure. Icho chishandiso icho inobvumira mushandisi kuviga IP yavo nguva dzose kudzivirira masevhisi kubva pakuwana chimiro chenzvimbo. Apple yakazivisa mu beta 7 yeIOS uye iPadOS 15 kuti yaizosiya basa racho muchimiro cheveruzhinji beta uye yaizoburitswa zviri pamutemo asi yakaremara nekutadza. Mwedzi mishoma yapfuura Apple yakazivisa dzimwe nyika kuti havazoone basa iri nekuda kwematambudziko nemitemo yavo. Nhasi tazviziva izvozvo Russia-yakawedzera mukana weichi chiitiko chakavharwa uye ingangowedzerwa kune runyorwa rwenyika uko chimiro chisingawanikwe.
ICloud Yakavanzika Relay inova beta chimiro mune yazvino beta yeiyo iOS 15
ICloud Yakavanzika Relay haizoone mwenje muRussia
ICloud Yakavanzika Relay ibasa rinokutendera kuti ubatanidze kune chero netiweki uye utarise internet ne Safari mune yakatonyanya kuchengetedzeka uye yakavanzika nzira. Ino chengetedza kuti traffic inobuda muchigadzirwa chako yakavharidzirwa uye inoshandisa mbiri dzakazvimirira dzekutumira internet kuitira kuti pasave neanogona kushandisa yako IP kero, nzvimbo yauri uye nebasa rako rekubhurawuza kugadzira rakadzama nhoroondo nezvako.
Muna Chikumi, Tim Cook akavimbisa kuti iyo iCloud Yakavanzika Relay yaisazosvika kuBelarus, Colombia, Egypt, Kazakhstan, Saudi Arabia, South Africa, Turkmenistan, Uganda nePhilippines. Mukubvunzurudzwa, akavimbisa kuti pakange pasina chipingaidzo kunze kwezvikonzero zvemitemo yenyika yega yega. Naizvozvo, shanduro dzekupedzisira dzeIOS 15 uye iPadOS 15 yaisazounza basa iri uye kana ichinge yawana nyika inenge isingawanikwe kuti ishandiswe.
ICloud Yakavanzika Relay haisisiri kutsigirwa muRussia pic.twitter.com/df4z1q0gLQ
Maawa mashoma apfuura ma tweets akatanga kuoneka uye Noticias vashandisi vane iOS uye iPadOS 15 betas ivo havana kukwanisa kutarisa neICloud Yakavanzika Relay muRussia. Muchokwadi, meseji yaizoonekwa yaiti: 'iCloud Yakavanzika Relay haisi kuwanikwa munzvimbo ino'. Naizvozvo, Apple inogona kunge yakavhara chimiro muRussia. Naizvozvo, zvaizowedzerwa kune dzimwe nyika umo chishandiso chisingazowanikwe kubva pamutemo kuvhurwa kweanoshanda masisitimu. Zvakare zvinowedzerwa kune macOS Monterey, pamwe.
ICloud Yakavanzika Relay inoshandisa maviri maseva akasiyana ku viga IP yemushandisi uye nzvimbo. Mune yekutanga server iyo yepakutanga IP inobviswa uye mune yechipiri chiratidzo chinokandirwa kunzvimbo yekuenda. Iyo IP inotumirwa kero yenhema iyo geo-inotsvaga iyo yekutanga IP kuti igamuchire zvemunhu zvemukati. Kunyangwe kero yeIP yemushandisi yakavanzwa uye ichidzivirira maseva kubva mukugadzira ekutsvagisa profiles.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Apple inovhara iOS 15's iCloud Yakavanzika Relay chimiro muRussia